KIO participation in nation-wide ceasefire depends on military guarantees-ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကချင်ခရီးစဉ်ဖျက်သိမ်း | democracy for burma
KIO participation in nation-wide ceasefire depends on military guarantees-ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကချင်ခရီးစဉ်ဖျက်သိမ်း
tags: Burma, ceasefire, Kachin, KIO, Myanmar
The Kachin Independence Organization (KIO)’s participation inanation-wide ceasefire signing ceremony will depend on the political and military guarantees by the government, according to Hsan Aung of the Peace Creation Group (PCG).
The government and the KIA’s technical working group held meetings in Myitkyina, Kachin State on Wednesday and Thursday last week. The meetings focused on the military affairs of both sides, the formation of monitoring teams, IDPs, and the nationwide ceasefire deal. The two sides also discussed which observers would attend the nationwide ceasefire signing ceremony, for which leaders from both sides would be present.
“It is too early to confirm the KIO’s participation in the nationwide ceasefire deal signing ceremony. It depends on how much the government is willing to provide military guarantees. Trust is of great importance. It is not easy for me to predict,” Hsan Aung told The Daily Eleven.
“The KIO wants political and military guarantees from the government. It took 17 years to initiate political dialogue, even as battles continued. Accordingly, the KIO has lost trust in the government. So whether or not the KIO participates in the nationwide deal depends on this point.”
In his national radio address on October 1, President Thein Sein suggested that political dialogue depends onaceasefire deal.
“As soon as we have signed the nationwide ceasefire deal, political dialogue frames and principles will have to be negotiated and discussed in order to strengthen political dialogue,” he said.
The President added that the Union-level peacemaking committee and various ethnic political parties would negotiate the frames and principles for initiating political dialogue.
—— TODAY NEWS
မြစ်ကြီးနားမြို့တွင်ပြုလုပ်မည့် မြန်မာအစိုးရနှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO)၏ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲသို့ ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဗယ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်မည့်အစီအစဉ်ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် ယင်း ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဖိတ်ကြားသော်လည်း ကချင်လွတ်မြောက်ရေးဘက်မှ ဖိတ်ကြားခြင်းမရှိဟု အစိုးရအဖွဲ့ သတင်းရင်းမြစ်ကဆိုသည်။
အဆိုပါကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော KIA ဆက်ဆံရေးရုံးသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့သော်လည်း ထိုကိစ္စကို မသိရှိကြောင်း အဆိုပါ ဆက်ဆံရေးရုံးမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဒေါင်ခါးကပြန်လည်ဖြေကြားသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီတွင် အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်သည့်အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲသို့ မတက်ခြင်းဖြစ်မည်ဟုလည်း နီးစပ်သူများက ခန့်မှန်း ပြောဆိုနေကြသည်။ သို့ရာတွင် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နှင့် အစိုးရတို့၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲသို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး တက်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။အောက်တိုဘာ ၇ ရက်တွင် မြစ်ကြီးနားမြို့၌ပြုလုပ်မည့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲသို့ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် မစ္စတာ ဗီဂျေနမ်ဘီးယား တက်ရောက်မည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာအစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း၊ မွေးမြူရေး ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းမြင့်နှင့် မြန်မာ ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။
ဆွေးနွေးပွဲမတိုင်မီ သွားရောက်မည့် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ခရီးစဉ်မှာ ရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့် အောက်တိုဘာ ၅ ရက်က ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။
← THAILAND-LAOS :คน…มันไม่ใช่คน. NIKORN CHUNPROM
Myanmar-Burma: Ethnic nationalities badly needalaw for the protection of their rights →
News about Rioting in Meikhtelar-People update english မိထ္တီလာမြို့ တော်ဝင်ရွှေဆိုင် ပြဿနာဖြစ်ပွားမှု-VIDEO
IRCR မှ ကုလားများကို မြို့တွင်းသို ခိုးသွင်းနေ Rakhine News Group
#ด่วน!! #SHUTDOWN #BANGKOK !! "ไอ้ตั้งอาชีวะหมิ่นฯ" + "สมบัติ ทองย้อย" ผู้ต้องสงสัยยิงสุทิน(คปท.) โผล่!! เหตุปะทะ @ไอทีสแควร์ หลักสี่ (1 ก.พ. 57)
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သားငယ်ကိုထိန်လင်းတို့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်ဈေးကို ရောက်ရှိစဉ် ကြိုဆိုကြတဲ့ မြင်ကွင်း
!!! ด่วน!! จับการ์ด กปปส. ใส่เครื่องแบบตำรวจควบคุมฝูงชน ปลอมตัว พกอาวุธปืน กระสุนปืนเพียบ!!
၀ နှင့် နအဖ ဆက်ဆံရေးနောက်ကွယ်၌ ပြိုင်တူ စစ်ရေးထပ်ပြင်ဆင်